भोलि असार २२ गते आइतबार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Bigul News
भोलि असार २२ गते आइतबार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
असार २१, २०७६ Bigul TV
भोलि तपाई अत्याधिक भावनाशील हुनुहुनेछ। जसको कारण निर्णय गर्ने समयमा केहि असहज हुन सक्ला। भोलि तपाईलाई आफ्नैहरुसँग व्यवहार गर्दा पनि संयमता अपनाउनु होला। परिवारको स्वास्थ्यको कारण चिन्ता मात्र नभई खर्च पनि बढ्न सक्ला। भोलि यात्रा गर्दा सकेसम्म संयम भएको राम्रो हुनेछ।
भोलि तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार आउने देखिन्छ भने धेरै समय देखि अड्किएको कार्य पनि शुरु शुरु हुनेछ। आफन्त र मित्रहरुले परेको ठाउँमा राम्रै सहयोग गर्नेछन्। आर्थिक मामलामा पनि सफलता मिल्न सक्ला। भोलि भाग्यवृद्धि हुने देखिन्छ। नसोचेको क्षेत्रमा पनि सफलता हात लाग्नेछ।
भोलि जुनै पनि कार्यमा वाधा आईपर्ने देखिन्छ। साथै भोलि निर्धारित कार्य समयमा सम्पन्न नहुनाले मानसिक चिन्ता पनि बढ्न सक्ला। भोलि अध्ययनमा पनि असफलता मात्रै हात लाग्नेछ। तर भोलि तपाईको परिवारमा भने अनुकूल वातावरण हुनेछ। साँझ भने आय वृद्धि हुनेछ । मित्रजनसंग व्यवहार गर्दा संयम रहनु होला।
भोलिको दिन तपाईको मनोरन्जनमा व्यतित हुने देखिन्छ। स्वादिष्ट भोजन मात्र नभई भोलि उचित सत्कार पनि मिल्नेछ। आनन्ददायक प्रवास रहनेछ। भोलि दाम्पत्यजीवनमा धनिष्ठता अनुभव गर्नु हुनेछ भने परिवारबाट आर्थिक क्षेत्रमा पनि सहयोग मिल्नेछ। सङ्गीत प्रति भोलि तपाईको लगाभ बढ्नेछ।
भोलि तपाईलाई दुख मात्रै मिल्ने दिन परेको छ। सानो-सानो कुराले पनि तपाईलाई चिन्तित बनाउनेछ। आर्थिक समस्याले सताउने हुँदा भोलि तपाईको मानसिक स्वास्थ्य कम्जोर रहन सक्ला। कानुनी कार्यमा पनि संयम रहनु भएको उचित हुन सक्ला। राजनीतिक छबिमा आँच आउन सक्ने हुँदा संयम रहनु होला।
भोलि व्यवसाय विस्तार गर्ने मौका मिल्न सक्ला। भोलि व्यवसायमा परिवारको सहयोग मिल्नेछ। जागिरको शिलशिलामा यात्रा हुने देखिन्छ भने आर्थिक रुपमा धेरैनै लाभ मिल्ने दिन परेको छ। साथै भोलि कलाको क्षेत्रमा चर्चा कमाउन सफल हुनुहुने देखिन्छ। भोलि स्वास्थ्यले मात्र नभई समयले पनि साथ दिनेछ।
भोलि तपाईको परिवारमा आनन्द र खुसीको माहोल हुनेछ। भोलि जागिर गर्नेहरुको लागि दिन धेरै शुभ रहेनछ। आय वृद्धि हुनुका साथै भोलि पदोन्नति पनि हुन सक्ला। भोलि माताको पक्षबाट धेरै लाभ मिल्नेछ। भोलि प्रेम जीवन पनि धेरैनै सफल हुनेछ। भोलि तपाई अरुको लागि प्रेरणाको श्रोत बन्नुहुनेछ।
भोलि हरेक विषयमा तपाई नकारात्मक अनुभव गर्नुहुनेछ। थकान र आलसको कारण भोलि तपाई कुनै पनि कार्य फत्ते गर्न सक्षम हुनुहुनेछैन। भोलि सानो-सानो कुराले पनि मनमा डेरा जमाउन सक्ला। वाद-विवादको कारण भोलि तपाईको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ला। भोलि यात्रा गर्दा धेरैनै एस् संयम रहनु पर्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईले आफ्नो वाणी र क्रोधमा नियन्त्रण राख्नु होला। साथै भोलि तपाइले आफ्नो व्यवहार र बोलीमा पनि समानता राख्नु पर्ने देखिन्छ। विभिन्न कारणले गर्दा मानसिक व्यग्रता अनुभव हुनेछ। शारीरिक स्वास्थ्यले पनि खासै साथ दिने छैन। भोलि धन खर्च हुनाले आर्थिक समस्या हुन सक्ला।
विचार, व्यवहारमा भोलि भावुकता विशेष मात्रामा हुने देखिन्छ। जसको कारण दैनिकीमा केहि असर पर्न सक्ला। मित्रजनसँगको पल खुशीपूर्वक व्यतित हुनेछ। तन-मनमा स्फूर्ति र प्रसन्नता रहन सक्ला। व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ भने भाग्योदयको समय पनि रहन सक्ला। सार्वजनिक जीवनमा पनि मान- प्रतिष्ठा बढ्न सक्ला।
भोलि तपाईको यश, कीर्ति र सफलता बढेर जानेछ। साथै भोलि तपाईको प्रसिद्धि बढ्नाले मन आनन्दित रहन सक्ला। भोलि पारिवारिक जीवनमा भने खासै उल्लेख्य मेलमिलाप नहुने देखिन्छ। सरकारी कर्मचारीहरुले भोलिो दिनमा धेरैनै संयम रहनु पर्ला। तर भोलि तपाई विरोध वा प्रतिस्पर्धाहरू पराजित गर्न सफल हुनुहुनेछ।
भोलि तपाई साहित्य लेखनमा सृजनात्मकता प्रकट गर्न सफल हुनुहुनेछ। भोलि विद्यार्थीहरूको लागि शुभ दिन रहेको छ। भोलि तपाईलाई शेयर सम्बन्धि कारोबारमा राम्रै लाभ मिल्ने देखिन्छ। भोलि प्रेम जीवन सरल र उत्कृष्ट रहन सक्ला। विपरित लिंगी प्रति तपाईको आकर्षण भोलि बढ्न सक्ला।
प्रकाशित : शनिबार, असार २१, २०७६१८:४२
चन्दा उठाउन अनेरास्ववियुले लगायो प्रतिवन्ध, उठाएको पाइए कारवाही गरिने !